Erey bixin iyo astaamo: Si sax ah uga hadal astaan. | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | logos
Waxaa jira noocyo kala duwan oo erey bixinno ah markay tahay ka hadalka sawir shirkadeed.
Nolol maalmeedka, waa wax aad u badan in marka laga hadlayo a image image Aynu ku yeelno qaab qaldan, innagoo aad u caam ah in la adeegsado adeegsiga guud marka aan rabno inaan ka hadalno summad. Waxaan u egnahay inaan adeegsanno ereyo sida "calaamadda" marka aan ka hadlayno calaamadeynta laakiin dhab ahaantii sidaas maahan. Logo waa wax aan ka badnayn oo ah «cambaareyn» ee sawirka shirkadda marka aan uga hadlayno si guud, waxaan u egnahay inaan ereygan u adeegsanno si aan ugala hadalno nooc kasta, laakiin kani run miyaa? Ma jiraan noocyo kale oo kala duwan marka laga reebo ereyga astaanta caanka ah? Way jiraan waana arki doonaa hoos.
Markii aan ka hadlayno sumad waa inaan ogaanno in loogu magac daray markii ugu horreysay ay tahay inay lahaato a nombre iyo in magacan lagu xasuusto loona gudbiyo, waxaa lagama maarmaan ah in la beero ama loo turjumo qaab ahaan, fasiraaddan ayaa ku kala duwan iyadoo kuxiran astaamaha muuqaalka muuqaalka, awoodna u leh inay hesho jaanis dhan oo ereyo ah oo looga hadlo, laakiin haddii waxaa jira shuruudo aad u tiro badan, maxaan kaliya u isticmaalnaa? Jawaabta tan waa xarunta weyn ee aan ku qasban nahay inaan si dhaqso leh ula xiriirno macmiilka, sababtaas darteed waxaan u adeegsanaa hal eray.
Gudaha terminologies markii laga hadlayo noocyada waxaan ka heli soo socda:
Icon kaliya (sawiro)
Isku-darka qaab-qorista iyo astaanta.
Saddexdaan eray ayaa ah kuwa guud ahaan koobaya matalaadda garaafka ee astaamaha, waa run inaan heli karno noocyo badan oo dheeri ah laakiin had iyo jeer isticmaalno waxyaabahan aasaasiga ah.
Aynu eegno qaar ka mid ah ereyadan loo adeegsaday noocyada caanka ah qaarkood.
Nooca Cocola-Cola waa tusaale cad oo ah logo (astaan ​​wanaagsan) wuxuu ku saabsan yahay isticmaalka suugaanta qoraalka iyada oo ah matalaadda ugu weyn ee astaanta, awood u lahaanshaha sidii astaan ​​ahaan marka ay leedahay waxyaabo qurxin sare leh.
El isologo waa gacaliye aan awoodin noolow astaantaada la'aan. Ereygan waxaa loo adeegsadaa marka sumaduhu ay leeyihiin muuqaal garaaf ah oo ka kooban qaab qoraal + calaamadda la isku daray iyadoon suurtagal ahayn in la kala tago.
Kala-soociddu waa marka qaabeynta iyo astaamaha la isku daro iyadoon suurtagal ahayn in labadaba la kala saaro
El sawir ahaan ka madax banaan awoodid kala saar canaasiirteeda oo u dhaqmaan si gooni gooni ah, qaab qorista iyo astaanta wadajirka ah way wada jiraan laakiin waa lakala tagi karaa oo si gooni ah ayey u shaqeyn karaan.
Qaab qoraalka iyo astaamaha astaamaha ayaa lakala saari karaa
Keliya laakiin uguyaraan, the isotype waxay u taagan tahay adeegsiga astaanta si ay nafteeda u matasho. Noocani wuxuu leeyahay awood weyn markay tahay in lagu qoro xusuusta macaamiisha.
Waxaan ka hadleynaa isyifaatiga marka astaanta kaliya uu matalayo sawir.
Isticmaal Warqadda Koowaad nooc ka mid ah noocyadu waa cunsur si ballaadhan loo adeegsado marka la metelayo astaan, qaar ka mid ah shirkadaha adeegsada ereyada noocan ahi waa: Kursi, Macdonald ... Waxay ku saabsan tahay isticmaalka bilowga ah magaca oo ah cunsur garaaf ah oo metelaya astaanta.
Xarafka ugu horeeya ee sumad.
ka gaabinta Waxaa si weyn loogu isticmaalaa noocyada qaar si ay u helaan magacyo u muuqda in la akhrin karo "ma sii socotaan" in higgaad loo sameeyo markii la magacaabay
Waxaa lagu gartaa iyadoo la adeegsanayo dhowr xaraf oo ah magaca sumadda.
Xaaladaha qaarkood, magacyadu waxay adeegsadaan waxa aan ugu yeerno "shey muhiim ah" astaanta lafteeda, oo noqon karta aasaasaha ama qof muhiim ah. Noocani wuxuu adeegsanayaa mid u gaar ah saxiixa si aad u hesho a taabasho shaqsiyeed iyo mid gaar ah, lumiyaa sharci ahaanshaha laakiin iftiiminaya muhiimadda dabeecadda cidda ay matasho.
Marka saxeexa aasaasiga astaanta astaantooda loo adeegsado sidii sawir muuqaal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » "Ii sheeg sidaad tahay oo magacaaga ayaan kuu sheegayaa." Logos?